रोल्पामा माओवादी राजनीतिः महरालाई ‘विस्थापित’ गरेर बर्षमान चुनावी मैदानमा ! | www.24nepal.com
रोल्पा, १६ असोज– नेकपा माओवादी केन्द्रको आधार इलाका मानिने रोल्पाबाट आगामी चुनावमा बर्षमान पुन उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । गत संविधान सभा चुनावमा रोल्पा क्षेत्रनम्बर १ बाट वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा निर्वाचित भएका थिए ।
क्षेत्र नम्बर २ बाट बर्षमान पुनकी पत्नी, सभामुख ओनसरी घर्ती निर्वाचित भएकी थिइन् । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि माओवादीले रोल्पाबाट उम्मेदवार सिफारिस गरको छ ।
जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बर्षमान पुनको नाम सिफारिस गरिएको छ । संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा ललितपुरबाट चुनाव लडेका बर्षमान पुन पराजित भएका थिए ।
आइतबार बसेको माओवादी जिल्ला कमिटीको बैठकले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हो । यसअघि रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा चुनाव लड्ने चर्चा चलेपनि उनको नाम भने सिफारिस भएन ।
यस्तै प्रदेशसभा चुनावमा रोल्पाको क्षेत्र नं. १ बाट माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य जोखबहादुर महरा, युवा नेता कुलप्रसाद केसी र क्षेत्र नं. २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दीपेन्द्र कुमार पुनमगरको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै समानुपातिक तर्फका लागि केन्द्रीय सांसद्का लागि पूर्व मन्त्री जयपुरी घर्तीमगर, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, प्रदेशका लागि क्षेत्र नम्बर १ बाट चन्द्रबहादुर बुढामगर ‘शेष’, मिना बुढामगर ‘प्रतीक्षा’, पवन कुमार कवँर, ओमबहादुर पुनमगर, सीता आचार्य, राजकुमार कवँर, इन्द्र बहादुर रोकाको नाम सिफारिश गरिएको छ ।
यस्तै २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरेन्द्र थापाघर्ती ‘ध्रुव’, तोप बहादुर डाँगी, कर्मलाल परियार, रामधन पुनमगर, हरीसरा घर्तीमगर, भक्तबहादुर वली, काशीराम बुढामगरको नाम सिफारिश गरिएको छ ।
नुहाउने क्रममा खोलाले बगाउँदा ७ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
अब लहानलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त नगरपालिका बनाइने
बन माहुरीको टोकाईबाट बृद्वसहित चार घाइते